UPhando lweCMO-Agasti 2013 | Martech Zone
UPhando lweCMO-Agasti 2013
NgoLwesibini, Agasti 27, 2013 Douglas Karr
Amagosa aziNtloko okuthengisa (i-CMOs) aya esanda ngokwaba izibonelelo kwimithombo yeendaba zentlalo, kodwa inani elothusayo aliboni ukubuya okubambekayo kolu tyalo mali, ngokwe Uphando lweCMO.
Kuphela ziipesenti ezili-15 zee-CMO ezingama-410 ezivavanywe nguprofesa UChristine Moorman of Isikolo seShishini iFukea yeShishini Bathe banobungqina bokuba nefuthe elininzi kwinkcitho yabo yokuthengisa kwimithombo yeendaba. Enye iipesenti ezingama-36 ziphendule ukuba zinoluvo lwempembelelo esemgangathweni, kodwa hayi ifuthe lobungakanani.
Phantse isiqingatha se-CMOs kuvavanywa (iipesenti ezingama-49) khange zikwazi ukubonisa ukuba imisebenzi yeendaba zentlalo yenza umahluko. Ngaphandle koku, abathengisi kulindeleke ukuba bandise inkcitho kwimidiya yoluntu ukusuka kwi-6.6 yepesenti ukuya kwi-15.8 yepesenti kule minyaka mihlanu izayo.
Ukubonisa ifuthe kwinkcitho yentengiso iyonke kuhlala kuyingxaki ngokubanzi kwiinkampani, ngokweeCMOs eziphononongiweyo. Sisinye kwisithathu kuphela sabarhwebi abaphezulu abaphononongiweyo abanika ingxelo ukuba iinkampani zabo ziyakwazi ukubonisa ngobuninzi ifuthe lenkcitho yabo kwintengiso. Akumangalisi ke, ngokuka Moorman, ukuba iipesenti ezingama-66 ze-CMO zichaze ukuba bafumana uxinzelelo ngakumbi ukubonisa ixabiso lentengiso kwii-CEO nakwiibhodi zabo. Kwezi, ezibini kwisithathu zixela ukuba olu xinzelelo luyanda.
“Ubunkokeli kwezentengiso bufuna ukuba iiCMO zinike ubungqina obuluqilima bokuba utyalomali lwesicwangciso-qhinga luyabhatala iifem zabo ngokufutshane nangexesha elide. Ii-CMO ziya kufumana 'isihlalo etafileni' kuphela xa zinokubonisa isiphumo senkcitho yazo kwintengiso, "utshilo uMorman, umlawuli weCMO Survey.
Marketing kubahlalutyiInguqulelo yentengiso yedatha enkulu, okwangoku ziipesenti ezi-5.5 zohlahlo-lwabiwo mali kwaye kulindeleke ukuba inyuke ukuya kwiipesenti ezingama-8.7 kule minyaka mithathu izayo. Ukusetyenziswa kwale datha inkulu kuhlala kungumngeni, nangona kunjalo, njengepesenti exeliweyo yeeprojekthi zisebenzisa ukuthengisa okukhoyo okanye okuceliweyo kubahlalutyi iye yehla ukusuka kuma-35 epesenti kunyaka ophelileyo yaya kutsho kuma-29 ekhulwini ngoku.
Oku kuhambelana nokufumanisa ukuba iiCMOs zinika ingxelo “yomndilili” kuphela wentengiso kubahlalutyi kwintsebenzo yenkampani (i-3.5 kwinqanaba le-7-amanqaku apho i-1 "ingekho kwaphela" kwaye i-7 "iphakame kakhulu"). Eli nani lehlile ukusuka kumlinganiso wokuqala kunyaka ophelileyo xa wawuyi-3.9.
Abathengisi nabo ukwandisa imizamo yabo ekuqokeleleni idatha malunga nokuziphatha kwabathengi kwi-Intanethi. Phantse iipesenti ezingama-60 ziqokelele idatha yokuziphatha kwabathengi kwi-intanethi ngeenjongo zokujolisa, kwaye iipesenti ezingama-88.5 kulindeleke ukuba zikwenze ngokuhamba kwexesha.
Ngaphandle kwesikhalo esikhulayo malunga nokujongwa kumacandelo karhulumente nawabucala, imfihlo ayibonakali ngathi iyakhathaza abathengisi. Amashumi amahlanu eepesenti kubaphenduli babenamanqanaba asezantsi okuxhalaba, ngelixa iipesenti ezi-3.5 ziphendulile "babenexhala kakhulu" malunga nemfihlo.
Abarhwebi kufuneka bathethathethane ngokunyanisekileyo nabathengi kumba wabucala- abathengi kufuneka bazi ukuba bayabonwa, bavumelane nolo luqwalaselo, kwaye bafumane ixabiso ngakumbi kubarhwebi ngokubuyisela, utshilo uMorman.
Ii-CMO zinika ingxelo ngamanqanaba aphezulu okuphumelela kuqoqosho lwe-US ngokubanzi kwiminyaka emine. Kwinqanaba le-0-100, kunye ne-0 ekubeni nethemba elincinci, amanqaku e-CMO angena kwi-65.7, ephantse yenyuka ngamanqaku angama-20 kumlinganiso ofanayo othathwe ngo-Agasti 2009, kufutshane nendawo ephantsi yokudodobala koqoqosho. Phantse iipesenti ezingama-50 zabathengisi abaphambili baphendule "banethemba" malunga noqoqosho lwe-US xa kuthelekiswa nekota ephelileyo. Emuva ngo-2009, ii-optimists zangena nge-14.9 yeepesenti kuphela.
Ezinye iziphumo eziphambili zezi
Ukukhula kuhlahlo-lwabiwo mali kuku kulindeleke ukuba inyuse iipesenti ezi-4.3 kwiinyanga ezili-12 ezizayo. Ii-CMO zichaze ukuba utshintsho kwinkcitho luyonyusa iipesenti ezi-9.1 kwiminyaka emibini eyadlulayo, ebonisa ukuba eli nqanaba lenkcitho lihamba ngendlela yokuphikisana noqoqosho ngokubanzi.
Utshintsho kwinkcitho kwintengiso yedijithali nayo inayo inyuswe yaya kwiipesenti ezili-10.1 (Kwiminyaka emithathu eyadlulayo, eli nani lalingama-13.6 eepesenti).
Iipesenti ezingamashumi amabini anesine zabaphenduli zichonge iNtshona Yurophu njengeyona marike iphezulu yokukhula kwengeniso yamazwe aphesheya, ilandelwa yi China ne Canada (iipesenti ezili-18 inye).
Eyasungulwa ngo-Agasti 2008, uphononongo lwe-CMO luqokelela kwaye lusasaze uluvo lwabathengisi abaphezulu eMelika amatyeli amabini ngonyaka. Funda ngakumbi kwi Uphando lweCMO.
tags: igosa eliyintloko lentengisocmoUcwaningo lwe-cmoumlawuli wentengisoIindlela zokuthengisaiimetworkukubuya kutyalo maliimidiya yokuncokola roisurvey
UkuBloga kweNdwendwe-Uyenza ngokuGwenxa
Agasti 28, 2013 kwi-10: 04 AM
Masiqale ukubandakanyeka ngakumbi kwimizamo yethu yemithombo yeendaba. Yile ndlela inxenye enkulu yabantu ekufumana ngayo ngoku iintsuku. Ukuba awuyisebenzisi, ukulahlekelwa kwakho ngabo bonke abantu abanokubona.
Agasti 28, 2013 kwi-10: 05 AM
Ndicinga ukuba ngumsebenzi wabathengisi ukuqinisekisa ukuba baneenjongo ezichaziweyo kunye neendlela zokulandela impumelelo yokusebenzisa imithombo yeendaba zentlalo… emva koko banokubonakalisa ixabiso lemizamo. Ngaphandle kobungqina, kunzima kwiinkampani ukuba zenze utyalomali.
Agasti 28, 2013 kwi-10: 16 AM
Kuyinyani, ngamanye amaxesha kunokuba nzima ukubonakalisa kunye nokuqinisekisa wonke umntu ukuba intengiso yemidiya yoluntu ibalulekile namhlanje.
Agasti 28, 2013 kwi-10: 17 AM
Uxolo, * akakwazi * uhlobo. haha.
Agasti 28, 2013 ngo-2: 54 PM
Ulwazi olulungileyo uDoug, enkosi ngokwabelana. Ndiyazi ukuba esi sisihloko endikhe ndayikhetha ingqondo yakho ngamatyeli amaninzi… kwaye sizoqhubeka njalo. Kum, zimbini izitshixo ezichaziweyo kunye nezibalulekileyo zokuba yi-CMO / intengiso elungileyo:
1) Ukwakha ubudlelwane obuhle kumaqela akho angaphakathi, kodwa ubudlelwane bangaphandle nabo. Ndicinga ukuba ukulawulwa kobudlelwane kubaluleke kakhulu kwimpumelelo.
2) Ukubonisa ukuba yintoni ekwipudding yakho. Kukho idatha ekhoyo enokubonisa ukuba into iyasebenza okanye ayisebenzi ngomsebenzi omncinci wokuqikelela. Ukuba nesakhono sokujikeleza xa kukho into engasebenziyo, bonisa okuninzi (UKUBA AKUKHO OKUNGAKUMBI) malunga nabathengisi abanakho ukuthengisa ngempumelelo ukuba undibuza.
Uziva njani ngamanqaku am amabini?